Dzinodzora Yakavanzika Mask
Ungasarudza sei inoraswa yega masiki? Kune masiki ekurapa, vagari vane hanya vanogona kusarudza kupfeka zvinoraswa. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo sterilization level uye yakajairika nhanho yakatarwa pane yekunze kurongedzwa kwekurapa masikisi ekurapa anoreva kuchena kwemaski iyo pachayo, iyo isina ...
Munguva yedenda, kuitira kuchengetedza hutano hwedu, isu tinofanirwa kupfeka masiki kana tichienda kunze. Saka, tinofanirwa kusarudza sei mamask kudzivirira hutachiona? Iyo maski yekotoni inovimba neyakagadzika yemachira ekotoni kuti iite basa rekudzivirira uye kusefa Inogona chete kuvharira zvidimbu zvehukuru hwebvudzi w ...
Iyo firita yezvinhu zveFFP2 mask inowanzo iine mana mairi Pane zvipenga zviviri zvemachira asina kurukwa, nhete yemachira akasaswa uye nhete yeanochinjiswa-neshinda yekotoni. Iyo shoma yekusefa mhedzisiro yeFFP1 inopfuura 80%. kusefa mhedzisiro ye FFP2 inopfuura 94% .Iyo shoma yekusefa eff ...
Kuitira kudzivirira uye kudzora denda iri zvakanaka. Iyo masiki ndiyo yakakosha mutsetse wekuzvidzivirira kubva kune nyowani coronavirus hutachiona. Wese munhu anoda kupfeka mamask paanoenda kunzvimbo dzeruzhinji. Masiki evana ekurapa kwete chete anokwanisa kusefa guruva uye mukume, asi zvakare anokwanisa kusefa hutachiona ...
Guruva masiki anonyanya kushandiswa mukushanda nharaunda dzine yakadzika kuwanda kwemweya unokanganisa nemhepo, pamwe nenzvimbo dzekushandira panogona kugadzirwa guruva. ​​Guruva masiki zvinhu zvakakosha zvekuchengetedza zvivakwa zvevashandi vanoita uye vakafumurwa neguruva. Sefa bhokisi rine chete adso ...
Kutarisana nemasikisi panguva ye COVID-19 denda
Kupfekedzwa kwemeso kumeso panguva ye COVID-19 denda kwakagamuchira kurudziro dzakasiyana kubva kumasangano ehutano ehurumende nehurumende. World Health Organisation nemamwe masangano ehutano eruzhinji anobvumirana kuti masiki anogona kudzikamisa kupararira kwehutachiona hwehutachiona hwakadai se COVID -...
Kubudirira zvidzidzo zve COVID-19
Ongororo yeWHO-yakabhadharwa yakarongeka naChu et al. (Chikumi 2020) yakaburitswa muThe Lancet yakaona kuti kushandiswa kwechiso kumeso kunogona kukonzera kudzikisira kwengozi kutapukirwa nedenda-causative betacoronaviruses, umo N95 kana mamwe mafema akafanana akazoita kudzikiswa kwenjodzi kwakakura kupfuura kurasa ...
SH Vatsva Vana Mask neValve
Yevana Chiso Mask Reusable Chiso Mabhenda ane Anofema Valve, Muromo Inodzivirira Midziyo YeYako Kid Hutano Kufuridzira, Iine akawanda akanaka mapatani uye ruvara, 1 pc pabhegi. Zvekuraira ndapota nyorera sales@shgoodmask.com, maita basa!
CE Yakagamuchirwa Mask
Munguva yekupararira kwe COVID-19, masiki akave chinhu chakakosha chekuchengetedza wega.Vashandisi vanozvipfekedza kusefa mweya unopinda mumhuno nemukanwa uye kudzivirira magasi anokuvadza, hwema uye madonhwe kupinda nekubuda mumuromo nemumhino. Kune mamaki ekudzivirira ekufema uye ekuvhiya ...
Iyo maski yekurapa inogona kuganhurirwa mune yekurapa yekudzivirira maski, yekuvhiya mask uye yakajairika ekurapa mask. Iyo yekudzivirira yekudzivirira masiki imhando yeyakavharwa wega-priming firita mhando yekurapa yekudzivirira michina ine yakakwira dziviriro giredhi. Yekurapa yekudzivirira maski inogona kusefa iwo maarticles mumhepo, cu ...
Unyanzvi hwekudzivirira hweMask95 chiri pamusoro pe95%. Kune zvidiki zvinhu zvakakura kupfuura 0.3 micron, iyo KN95 mask inogona kuvhara zvese zvidiki zvidiki zvakakura kupfuura 0.3 micron kubva kunze kwemask. Mavhairasi uye mabhakitiriya anowanzo hombe kupfuura 0.7 micron muhukuru, saka iyo KN95 mask inogona kuchengetedza aga ...
Disposable Nzira Masiki
Masiki ekuvhiya ekurapa anopfekwa pamhuno nemuromo kudzivirira kupararira kwemahara uye tusingaonekwe nemhepo kuti tivhure maronda ekuvhiya, uye kudzivirira kupararira kwemadonhwe kunze anotamba nzira mbiri dzekuchengetedza kwehupenyu. Masiki ekuvhiya ekurapa akagadzirwa nezvinhu zvakaita sekumeso ...